Gam akporo Nougat ruru naanị 7% nke gam akporo ngwaọrụ | Akụkọ akụrụngwa
Gam akporo Nougat ruru naanị 7% nke gam akporo ngwaọrụ
Ntisa na gam akporo ka bu ihe edere na echere na obu eziokwu na obere obere ka emesiri ya mma na nke a, ma ntinye nke ihe omuma ohuru nke sistemụ arụmọrụ ka dị ala taa, 0,5% nke ngwaọrụ niile dị na gam akporo nọ na ụdị Nougat 7.1. Onu ogugu a ruru 6.6% n'ihe banyere gam akporo Nougat 7.0, ma n'ozuzu ya ma hụ nsonaazụ ndị enwetara na ntuli aka na nso nso a, ha yiri ka ọ bụ ọnụ ọgụgụ dị ala maka ụdị nke dị nso ịhụ onye bu ya ụzọ, gam akporo O.
Anyị na-aga n'ihu na-eche na data maka Android Kitkat ma ọ bụ Lollipop ka dị oke elu maka ụbọchị anyị nọ, mana nke a bụ nsogbu ebighi ebi nke ngwaọrụ gam akporo. Mgbe anyị na-ekwu maka “nsogbu” anyị apụtaghị na ụdị ndị gara aga dị njọ ma ọ bụ na ha anaghị arụ ọrụ ọfụma, naanị na ha enweghị nhọrọ ọhụụ dị na ụdị ndị kachasị ugbua na ọkachasị nchekwa nchekwa, wdg. Nke a bụ tebụl na nsụgharị arụnyere na gam akporo ngwaọrụ ruo taa:
Enweghị ọtụtụ ihe ị ga-ekwu maka ịlele Nougat percentages, mana nke a bụ ihe na - eme kwa afọ na nsụgharị ọhụrụ. Ihe enweghị ike ịbụ bụ na taa ha na-aga n'ihu na-ebupụta ngwaọrụ nwere nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ ochie, mana anyị amatalarị na nke a abụghịkarị mkpebi ụlọ ọrụ nke ngwaọrụ ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe na-emetụta.
Anyị enweghị ike ịgọnahụ na Android Nougat na-aga n'ihu na-abawanye oke karịa ọnwa na ọtụtụ ngwaọrụ enweworị sistemụ arụmọrụ a kemgbe ọ malitere, dịka LG G6, Huawei P10 ma ọ bụ Samsung Galaxy S8 kachasị nso, mana ọnụ ọgụgụ ndị a kwesịrị ịdị elu. Maka ihe kacha nwee nchekwube ọ bụ ihe ezi uche dị na ya iche na site na ihe dị ka 3% nke ngwaọrụ nwere ụdị kachasị ọhụrụ dị na Machị gara aga ruo 7% nke a, ọ bụ ezigbo nkezi, Mana anyị nwere ụdị gam akporo na-esote gam akporo naanị n'akụkụ nkuku ya mere na ọ bụ oge iji tinye batrị na ngwaọrụ ndị na-abụghị nke ọhụrụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Gam akporo Nougat ruru naanị 7% nke gam akporo ngwaọrụ
HMD Nokia na - enye gị ohere ịmebe ụdị mkpọtụ pere mpe maka Nokia 3310
WhatsApp dị ala n'ụwa niile ma ọ ga-aga ogologo oge